Ukhulelwe eyesibili unkosikazi kaCaster
UViolet ongunkosikazi kaCaster Semenya osezithwele ingane yabo yesibili Isithombe: INSTAGRAM
UMSUBATHI wakuleli uCaster Semenya usememezele ukuthi yena nonkosikazi wakhe uViolet balindele ingane yesibili. USemenya usenameke izithombe eziveza unkosikazi wakhe enesisu esikhulu nokubonakala sengathi usezobeletha maduze. Laba bashadikazi bavele banendodakazi eyodwa u-Ora osanda kugubha iminyaka emibili azalwa.
Ngesikhathi bememezela ukuthi balindele u-Ora abantu babajabulela kakhulu kanti namanje balokhu bebabongele njalo. USemenya uthe ukukhulelwa kukankosikazi kusho ukwanda komndeni wakhe nokuyinto engumusa nemjabulisa kakhulu.
"Sonke asisakwazi nokulinda, uNkulunkulu usekhethe ukusibusisa ngalo mphefumulo. Ngomusa nothando umndeni wethu uyakhula," kusho uSemenya.
Abantu balokhu bembongele njalo emakhasini akhe ahlukene okubalwa uTwitter no-Instagram. Yize kunjalo kodwa uTwitter njengokujwayelekile bakhona abaphuma eceleni abalokhu bethi kusamele lo msubathi achaze kabanzi. Abantu abaningi abakhombisa ukufundiseka babonakala becobelela nangolwazi lwezesayenzi abakholelwa ukuthi uma abantu bezenzela ucwaningo ngeke bazikhathaze ngempilo yabanye abantu.